PLAE V: Faritra telo no misitraka azy
Firenena isan’ny voalaza ho mandripaka ala be indrindra maneran-tany i Madagasikara. Hatramin’ny taona 2050 raha tsy voafehy izay fandripahana ala izany dia tsy hisy intsony ny ala voajanahary eto amintsika. Loza mananontanona ho an’ny fambolena eto amintsika. Mitondra ny anjara birikiny amin’ny fandrakofana ala an’i Madagasikara, 40.000 Ha isan-taona hatramin’ny taona 2023, ny Fandaharan’asa miady amin’ny fikahoan’ny riaka ny nofon-tany andiany faha-5 na ny PLAE V.
Ny Rainao... hamaly soa anao
Alarobia 26 febroary 2020 — Fanosorana lavenona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Matio 6, 1-6. 16-32 — Mibebaha ianareo fa efa akaiky ny Fanjakan'ny Lanitra.
Pejy 178 amin'ny 204